“ရွှေမြန်မာ”: ဂျီတော့ခ်ချည်း သုံးနေမယ့်အစား ဘလော့ဂ်တင်ပါလား
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: Tag ပိုစ့်, မျှဝေခြင်း, ဆောင်းပါး
zox said... @ 22 October 2009 at 12:28
တ၀ကြီး ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကျေနပ်လွန်းခဲ့ပါတယ်။ တကယ့် ပွိုင့်တွေကိုမှ ရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည့်စုံတဲ့ တွန်းအားတွေ ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မိတ်သစ် ဆွေသစ် အဖြစ် ၀မ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ့ထက် မက အောင်မြင်ပါစေ။
မောင်ကောင်း said... @ 22 October 2009 at 14:04
လူငယ်တွေအတွက် သိသင့်တဲ့ မှတ်သားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါပဲ... တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်ပါပဲအစ်မရေ.... ဆက်လက်အားပေးလျက်ပါအစ်မ...
yamin said... @ 22 October 2009 at 14:31
Thank to your comment.
I am waiting all friend suggestion.
မေကျော် said... @ 22 October 2009 at 17:10
thet said... @ 22 October 2009 at 18:54
မိုးသွေးငယ် said... @ 22 October 2009 at 19:06
အရေးသားပြောင်းမြောက်လှတဲ့ ရေးသားချက်တွေ ကြောင်း ဖတ်လို့ ကောင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ လူငယ်တွေ ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ် ခွင့် ရစေချင်ပါတယ်။
ကြိုးစားထားတာ တွေ့ ရတာ ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်းပါ မမ အပျို ကြီး ...:)
တက်လူငယ် said... @ 23 October 2009 at 01:28
ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီးတော့ စာရေးသူရဲ့ စေတနာနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အတိုင်းသား တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ပေးချင်တဲ့ ရသ၊ သုတ အကြောင်းအရာလေးတွေ စုံစုံလင်လင် ရေးသွားနိုင်တာက ချီးကျူးစရာပါပဲ။
ဒီလိုစာမျိုးကို လူငယ်တိုင်း ဖတ်ရှုမှတ်သားသင့်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း တိုးတက်အောင်မြင် ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ။
ပို့ထားတဲ့ ဆောင်းပါးမှာလည်း ဖော်ပြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ညရဲ့ကောင်းကင် said... @ 23 October 2009 at 10:03
လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ လူငယ်တွေကိုမျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ...
အလွယ်ဆုံးရတဲ့ blogspot ကို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာတိုင်းက ဖွင့်လို့မရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ...
ကျော်ရခွရတဲ့ အလုပ်ကိုလူတိုင်းမလုပ်တက်ကြသလို လုပ်လည်းမလုပ်ချင်ကြပါဘူး...
တိုးတက်မှုတိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အတားအဆီးတွေရှိနေတာ့ ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ...
နေ့အိပ်မက် said... @ 27 October 2009 at 16:49
မမရေ ခုမှဖတ်မိတယ်... ကားမစီးဘဲ ရထားစီးတဲ့အထိ ချွေတာပြီး ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့မမကို လေးစားသွားပြီ. အဟုတ်ပြောတာ..
အပေါ်က ကိုညကောင်းကင်ကိုပြောပေးပါ..... အခုwordpressလည်း wpmuပေးတဲ့သူတွေကြောင့် လွယ်သွားပါပြီလို့.. :D
myittar said... @ 28 October 2009 at 20:11
လူငယ်တွေ (ဆယ်ကျော်သက်-ချက်တင်စွဲတွေ) အရမ်းဖတ်သင့်ပါတယ်..
"အွန်လိုင်းမှ ပညာကိုသာ စွဲလမ်းပါ..ချက်တင်ကို မစွဲလမ်းမိပါစေနဲ့..." ဒါလေးကို အရမ်းသဘောကျလို့ ကူးသွားတယ်..
အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ဘလော့တစ်ခုမဖန်တီးနိုင်သေးတဲ့အတွက်..အခုတော့ သူများဘလော့တွေမှာပဲ ဆောင်းပါးလေးတွေ လိုက်ရေးတဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်..
(ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရင်တော့ သေချာလေး အချိန်လေးတွေ ဖဲ့ပေးချင်တယ်..မမရေ..အဲလိုမပေးနိုင်သေးလို့ပါ..)အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပီး..မှိုတက်နေမှာစိုးလို့လေ..
ဒါပေမယ့် ဘလော့ရေးတင်တဲ့လူတွေကိုတော့ အမြဲအားပေးလေးစားလျက်ပါ..
(အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတဲ့ မမကိုလဲ သဘောကျပါတယ်.)
zambukyaw said... @ 28 October 2009 at 20:41
လင်းအရုဏ် said... @ 30 October 2009 at 16:39
တကယ်အကျိုးရှိပါတယ်ဗျာ. အခုခေတ်လူငယ်တွေတော့ ခက်သားဗျ။ တစ်နေကုန် ချတ်တင်ပဲလုပ်နေကြတယ်။ ချတ်တော့လည်း ဘာရယ်မဟုတ် အရည်မရ အဖတ်မရ အစ်မရဲ့စာကို တွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်ဗျ။ အတွေးတူတဲ့သူချင်းတွေ့ရတာပေါ့...။
pe said... @3November 2009 at 20:53
a ma take care of yourself..
အမ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဦး